Indlela Yokuvimbela Ugaxekile Nge-Viber - Ukukhathazeka kobuchwepheshe be-Semalt
Uthole imilayezo yogaxekile ku-Viber kule nyanga? Uma kungenzeka ukuthi unayo, awunayo yedwa, njengoba le milayezo ikhona nxazonke.
Akusilo ukuhlaselwa okwedlulele kakhulu, lokhu ukwazisa ukuphazamiseka kuphelela ngokwengeziwe. Yilokho okushiwo ukuthi usuku lwamakhombandlela emisha lusemvelo ukusebenzisa nokukhohlisa.
Nazi ezinye zezindaba eziwusizo ezivela ku-Ryan Johnson, isazi esihamba phambili se- Semalt , esizokuqondisa ekuvikeleni i-akhawunti yakho ye-Viber kumilayezo yogaxekile.
Sizwa inani elinyukayo lemibhikisho evela kumakhasimende e-Viber ukuthi athola isilinganiso esiningi segaxekile ku-Viber. Eminye yale milayezo ingukucasula okungenakunqunywa. Nokho, eziningi zazo ziyingozi. Imilayezo yokuphangisa ukuzama ukuthola ulwazi olulodwa, ukushaja izinombolo zekhadi, noma ngisho nokuzama ukwethula i-malware kumajejethi sonke, futhi nesilinganiso esikhulu sezinkampani ze-Viber zigcizelelwa ngenhlalakahle yesicelo.
I-Viber ihlolisisa imilayezo yamahhala phakathi kwamakhasimende e-Viber ane-application efakwe kumakhalekhukhwini wabo. Njengoba ihlotshaniswa nenombolo eyodwa yocingo, amaklayenti ayingxenye eyodwa noma eqoshiwe yamarekhodi, futhi lawo marekhodi ahlobene nomakhalekhukhwini. Lokhu kusho ukuthi i-Viber iyisimo esikahle sokuzisa-kodwa okwenza kube yinto ephawulekayo kakhulu kubagaxekile. Ngale ndlela, banenkinga yokuthumela ugaxekile kumakhasimende e-Viber.
Kunoma yikuphi, ungavimbela abagaxekile, futhi i-Viber izama ukwenza kube nzima ngabagaxekile ukukuthumela imilayezo ecasulayo.
Kwenzekani, nxazonke, yilokhu: omunye ugaxekile udinga ukuba uthethe uxhumano oludakayo, ngakho-ke wenza umhlangano ngobuningi bomuntu abakuwo.
Umlayezo uthunyelwe kubo bonke, u-spammer ushiya ukuqoqwa, futhi ushiyelwe ilungiselelo elihle lokungahambi nganoma iyiphi indlela i-Beam Boycott shades, noma indlela yokuzuza inzuzo.
Amanye amaklayenti e-Viber abonile isilinganiso esiphezulu sogaxekile esithunyelwa kumarekhodi abo. Le milayezo ayithunyelwanga ngu-Viber, futhi ayigunyaziwe yinhlangano. I-Viber Media ayifuni neze ukuthumela amathengi kumakhasimende.
Ngokudabukisayo, lokhu akusho ukuthi ochwepheshe abanobuqili abangekho okwamanje bazama ukusebenzisa isiteji ukuthumela ugaxekile kubantu ngabanye. Ezinye izingosi ezisheshayo ziye zaqala nokunikela ngokuthumela imilayezo yogaxekile kumakhasimende ngenkokhelo, futhi i-Viber izama ukuyivala.
Ngaphandle kokuthola ithuba lokuthi uthole imilayezo awudingi, yilokhu okufanele ukwenze:
1. Uma othile ekuthumelela umlayezo wogaxekile, vula futhi ukhethe izinqumo (ku-iOS, leli yivili elisekhoneni eliphezulu elingakwesokudla).
2. Khetha okuthi "Square Square", njengokungathi uhlala njalo neklayenti okumele uyihlanganise.
3. Ungakwazi futhi ukubika i-spammer ku-Viber ngokuya kuleli khasi. Yenza iphuzu ukukhetha "inkinga ekhethekile" bese ubonisa ku-Viber ukuthi uthola ugaxekile kusuka kuklayenti. Ukwengeza, vula ku-Viber inombolo yocingo le-spammer, futhi bazobhekana nayo kusukela ngaleso sikhathi.
Sithemba ukuthi ukuhluka okuzayo kweViber kuzofaka amandla okubika ugaxekile ngokukhethekile kulesi sicelo. Ngokuba okwamanje ukuvimbela amaqembu anecala kuyinto engcono kakhulu ongayenza Source .